Inta la xaqiijiyey ilaa 16 ruux ayaa ku dhimatay rabshadaha ka dhanka ah Dr Abiy Ahmed - Awdinle Online
Home News Inta la xaqiijiyey ilaa 16 ruux ayaa ku dhimatay rabshadaha ka dhanka...
Inta la xaqiijiyey ilaa 16 ruux ayaa ku dhimatay rabshadaha ka dhanka ah Dr Abiy Ahmed
October, 25, 2019 (AO)- sida la xaqiijiyey 16 qof ayaa lagu dilay ama ku dhintay rabashadihii saacadihii ugu danbeeyay ka dhacay dalka Itoobiya ee looga soo horjeedo ra’iisal Wasaare Abiy Ahmed.
Khalalaasahan ama Rabshadahan dhacaya waxaa gadaal ka riixaya Ninka lagu magacaabo Jawar Maxamed oo horay u ahaa shaqsi siweyn ugu dhawaan ama saaxiib lahaa ra’iisal wasaaraha Itoobiya, waxaana uu ka tirsan yahay Qowmiyada ugu badan dalkaasi Itoobiya ee Oromada oo xitaa Abiy Ahmed uu ka soo jeedo.
Hay’adda Caalamiga ah ee Amnesty International ayaa sheegtay in dhimashadu intaa ka badnaan karto madaama ay soo baxayaan warbixinno hor leh oo ka hadlaya qalalaasaha taagan, iyadoo dhinaca kalana aysan jirin wali wax hoos u dhac ah oo ay sameynayaan dibadbaxyada iyo rabshadaha intaba.
Dadka dhintay badankood waxaa haleeshay rasaas ay rideen ciidamada Amaanka halka, sidoo kale waxaa jira dadku dilalka u isticmaalyaaan wax kasta oo ay heli karaan.
Deegaanada ay ku yaalaan Gurya qaarkood dab ayaa la qabsiiyay, gaadiid ayaa sidoo kale rabshadahan dhacaya lagu burburiyay, waxaana sidoo kale jira khasaare kale oo wali la soo cadeyn inta uu la eg yahay.
Jawar Maxamed oo warbaahinta la hadlay waxaa uu ku baaqay in degenaan la muujiyo, laakiin haddana marka dhinaca kale la eego waxaa uu ku eedeynayaa xukuumadda in ay ku xadgudubtay oo ay qatar ku tahay nolashiisa.
Previous articleHealth Ministry of Somalia Reports 25 New Cholera Cases
Next articleSOMALIA’S PRESIDENT URGES PUTIN TO JOIN FORCES IN THE WAR AGAINST AL-SHABAAB